dabayl nidaamka hybrid qoraxda guriga iyo ganacsiga - Ningbo Haitian Holding Co. Group, Ltd
Taageerada email sales@htwindsolarpower.com
Taageerada Call + 86-577-6820 6018
modules Gaarka ah
marawaxadaha dabaysha warshadaha wax soo saarka 10kw-50kw
dabayl Micro saarka 100-1000W marawaxadaha
marawaxadaha dabaysha Residential 1kw- saarka 5kw
inverter Roobka PV xidhan
PV sanduuqa Isgoyska
xakamaysada xeedho qoraxda
Roobka Wind on xakamaysada
Wind inverter kulanka Roobka
Wind hybrid Solar xakamaysada xeedho
Wind hybrid qoraxda inverter kulanka Roobka
PV System sii kordhaya
Flat uu saqafku Mount
Sheet Birta saqafku Mount
Tile uu saqafku Mount
Wind System sii kordhaya
munaaraddii Lever laabanto
munaaraddii Wire Guyed
dabaylaha nidaamka hybrid qoraxda guriga iyo ganacsiga
Sida laga soo xigtay khubaro badan oo tamarta la cusboonaysiin karo, "hybrid" nidaamka yar korontada in isku daraa dabaysha iyo (looxaanta) qoraxda teknoolajiyada bixisaa faaidooyin badan labada system.In hal badan meelaha, xawaaraha dabaysha waa yar yahay xagaaga laakiin qorraxdu goortay soo iftiimay ifka iyo dheer. Dabayshu waa xoog badan yahay ee xilliga qaboobaha marka qoraxda ka yar waa la heli karaa. Maxaa yeelay, jeer hawlgalka peak waayo, dabaysha iyo nidaamka qoraxda dhacaan waqtiyo kala duwan ee maalinta iyo sannadka, nidaamyada hybrid u badan tahay in uu soo saaro awoodda marka aad u baahan tahay.
Nidaamka waxaa ka mid ah:
1. PV Array: Tiro ka mid ah darfaha PV xiran ee taxanahan iyo / ama in la siiyo isku midka ah wax soo saarka DC ka soo baxay oo irradiance dhacdada. Orientation oo u janjeeri ee darfahoodii kuwanu waa beegyada uu design muhiim ah, iyo sidoo kale ka fujiyaan ka xanibaado ku wareegsan.
2. marawaxadaha Wind: Tan waxaa lagu rakibay on top of munaarad dheer, ururiya tamarta ogeed dabaysha iyo waxa diinta korontada in jaanqaadi nidaamka korontada guriga.
3. xakamaysada Hybrid: xakameeyo lacag bangiga batari iyo dheecaan macquul ah iyo ammaanka.
4. bangiga Battery: waxay noqon kartaa hal batari ama batari badan wada xiran si ay u abuuraan muhiimad mid batari badan oo danab iyo amp-saac awoodda loo baahan yahay. In qaar ka mid ah siyaabaha qaabeynta batteriga iyo awoodda yihiin go'aanka korontada ugu muhiimsan in la sameeyo, iyo doorasho caaqil ah ayaa kaa caawin kara damaanad siin joogta ah ee korontada iyo sidoo kale habka ah in uu yahay mid fudud in ay ku shaqeeyaan oo ay u ilaaliyaan.
5. Inverter: Converter A xoog ° shiiqda ± awood DC ka darfaha galay awood AC.
6. xamuulka: waxay u taagan tahay qalabka ugu shabakad isku xidhan ee dhismaha in lagu quudiyo ka inverter ah (xamuulka AC), ama bangiga batteriga (xamuulka DC).
Khibradda samaynta iyo warshadaha In PV Solar Energy & System Hybrid Wind-Solar.